Gudiga EACC oo 93 sarkaal u fidinayo tababar la xiriira la dagalanka musuqmaasuqa – The Voice of Northeastern Kenya
Gudiga EACC oo 93 sarkaal u fidinayo tababar la xiriira la dagalanka musuqmaasuqa
Star FM December 6, 2016
Sarakii sare oo ka tirsan maamul goboleedka Embu iyo sido kale dowlada dhexe oo ay tiradoodu gaareyso 93 ayaa lagu wadaa in gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC uu siiyo tababar la xiriira qaabka uga wanagsan ee msuqmaasuqa loola dagaalamo.
Ku xigeenka agaasimaha guud ee gobolka bartamaha Kenya Jackson Mue ayaa sheegay in sarakiisha la tababarayo ay noqon doonaan kuwa ka tirsan golaha fulinta ee countiga Embu iyo sido kale wakiilada goalaha hoose ee baarlamaanka.
Mr Mue ayaa intaas ku daray in dambiya ku saabsan musuqmaasuqa ay sanadkiba marar badan soo noqnoqdaan sidaas awgeedna ay sarakiisha u tababarayaan in aynan dambiyadan ugu lug lahaanin iyaga oo anan ogeyn.
Hasa ahate,Mr Mue ayaa carabka ku dhuftay in sarkaalkii hada la darensiiyo dambiyada soo noqnoqdo ee ku saabsan musuqmaasuqa oona mar kale falkaasi sameeyo laga qaadayo talabo sharciga waafaqsan.
Mr Mue ayaa dhanka kale xusay in gudiga EACC uu eegayo warbixinta hanta dhowrka guud ee dalka Edward Auko oo lagu sheegay in lacaga badan looga lunsaday countiyada.
← Gudiga IEBC oo siyasiyiinta uga digay ololaha siyaasadeed oo ay xili hore billabeen
1,300 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka →